နိုဝင်ဘာ၊ 2019 GvSIG, တီထွင်မှု
Geofumadas သည် Valencia ရှိ 15as အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ရက်များ၏သုံးရက်တာကိုလူကိုယ်တိုင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒုတိယနေ့တွင် gvSIG Desktop မှစတင်၍ အစည်းအဝေးများကိုပြီးခဲ့သည့်နေ့ကကဲ့သို့4အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်များအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည်။ သတင်းနှင့်စနစ်နှင့်ဆက်စပ်မှုအားလုံးကိုဤနေရာတွင်တင်ပြခဲ့သည်။
ပထမပိတ်ပင်မှု၏စပီကာများ၊ gvSIG အသင်းမှကိုယ်စားလှယ်များ၊
gvSIG Desktop 2.5 တွင်ဘာအသစ်တွေရှိသလဲ။ Mario Carrera ထုတ်ယူသည်
New expression generator: gvSIG Desktop ၏ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုများပြားစေခြင်း၊
gvSIG Desktop ပုံစံပုံစံမီးစက်အသစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊
JasperSoft - gvSIG Desktop တွင်အစီရင်ခံစာဒီဇိုင်းကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းဥပမာ ဟိုဆေး Olivas ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ထို့နောက်အကြောင်းအရာအလိုက်လုပ်ကွက်သည်စည်ပင်သာယာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စာအဆက်အသွယ်များလိုအပ်သောစက္ကူဖြင့်ဤသံသရာကို Mr. Álvaro Anguix နှင့်ဆက်သွယ်သည်။ စည်ပင်သာယာအဆင့်တွင် IDE တစ်ခုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ၊ တည်နေရာ / တည်နေရာဒေတာသည်ဖြစ်ပျက်လာမည့်ဖြစ်စဉ်များ (သို့) ဖြစ်ရပ်များအားအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်အတွက်အဓိကဇာတ်ကောင်များမဟုတ်ကြောင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အချက်အလက်များ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံသားစီမံခန့်ခွဲမှုကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။
“ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးမှာတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကတော့သတင်းအချက်အလက်တွေရှိတာပဲ။ ဒါပေမယ့်တည်ရှိတာကိုမသိရပါဘူး၊ ဆိုလိုတာကတော့စာရင်းပြုစုထားတာလည်းမရှိဘူး၊ မသိသေးဘူး၊ စည်ပင်သာယာအဆင့်မှာဒီထက်နည်းနည်းမျှဝေတာပဲ။ အလားတူစွာအချက်အလက်များထပ်ခါတလဲလဲထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ပွားခြင်းများ၌အလွန်အရေးကြီးသောမြူနီစီပယ်များသည်ထူးခြားသောလမ်းအစီအစဉ်မရှိသော်လည်းရဲတွင်တစ်ခုရှိသည်၊ မြို့ပြစီမံကိန်းသည်အခြားတစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်။ အားလုံး "vlvaro Anguix
လူ ဦး ရေပြEနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်ပုံကိုပြသသည့် Eulogio Escribano ၏တင်ပြချက်သည်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီးဆက်လက်တင်ပြသည်။ အချစ်။ သေးငယ်တဲ့မြို့တော်ခန်းမများတွင် Spatial ဒေတာအခြေခံအဆောက်အအုံ။ Escribano ပြောခဲ့သောမြူနီစီပယ်အသေးစားများသည်ကျေးလက်ဒေသများတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းတို့အတွက်စံပြလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်အရင်းအနှီးနှင့်အရင်းအမြစ်များနည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့် gvSIG Online မှတစ်ဆင့်အဆိုပြုချက်မှာ၎င်းတို့သည်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုပေါင်းစည်းထားခြင်းကြောင့်အသိုင်းအဝိုင်းသို့သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပို့ရမည့်သူများသည်စနစ်ထဲသို့ ၀ င်ရန်နှင့်တောင်းဆိုထားသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုဖော်ပြရန်ခလုတ်ကိုသာအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
"ဒီအချက်အလက်တွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့လူများစွာရှိတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့မြူနီစီပယ်တွေမှာဒီ GIS ကိရိယာမျိုးကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သေးငယ်တဲ့မြူနီစီပယ်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများကိုတွေ့နိုင်တယ်" Eulogio Escribano -AytoSIG
ဤသည်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအန်တိုနီယို Garcia Benlloch ၏တင်ပြချက်များနှင့်အတူအထမြောက် စီမံခန့်ခွဲမှု Bétera၏စီးတီး၏အခြေခံအဆောက်အ ဦ များ, အ Onda မြို့ကောင်စီမှ Vicente Bou သည် Onda မြို့ကောင်စီတွင် IDE ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်အောင်မြင်သောအမှုများကိုတင်ပြခဲ့သူ Silvia Marzal UTE Pavapark-Nunsys နှင့်အတူ။ ဤနောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်မှာအထူးသဖြင့် Onda City Council သည်ယခင်က IDE တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သောကြိုးပမ်းမှုနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောကိရိယာတစ်ခု၏အရေးပါမှုကိုနားလည်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်း SDI ကိုထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကူညီပေးမည့်အခြားဒေသခံလှုပ်ရှားသူများနှင့်အတူ၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအောင်မြင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
အဆုံးတွင်တက်ရောက်သူများနှင့်ပါဝင်တက်ရောက်သူများကစိုးရိမ်မှုများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြပြီး၊ လူတိုင်းအတွက်တိကျသော nomenclature အသုံးပြုမှုကိုပုံမှန်ဖြစ်စေ၊ သို့သော်၎င်းအချက်အလက်များအားတင်ပြခြင်းသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်သတ်မှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် Spatial Data Management တွင်ပါ ၀ င်သူများအတွက်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုဖြစ်ပါက gvSig suite ကဲ့သို့သောကိရိယာများပေးနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုနားလည်ရန်၊ အချက်အလက်ရယူသူများ၊ အာဏာပိုင်များနှင့်ဤအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သူများအားလုံးနှင့်သဘောတူညီမှုရရန်ကြိုးစားခြင်းကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။ Alvaro Anguix ပြောသလိုပဲ ဒီကနေ့မှာဒေတာမော်ဒယ်တွေရှိတယ်၊ သင်စမ်းကြည့်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူ့ကိုမှအာဏာပိုင်တွေ၊ ဒီနေရာမှာမြှို့နယ်တွေကဒီဒေတာမော်ဒယ်ကိုသုံးဖို့၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတင်းအကျပ်မလုပ်နိုင်ဘူး”
အခြားတစ်ဖက်တွင်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းတို့သည်မသိနားမလည်နိုင်လောက်အောင်အတော်အတန်သိသာထင်ရှားသည်။ အကြောင်းမှာအချို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုသို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာပို့ဆောင်ပေးပြီး၎င်းအား၎င်းတို့အားလုံးဝရွှေ့ပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ။ ဒီသီးခြားလုပ်ရပ်မှာစပိန်လိုနိုင်ငံတွေဟာဒီကိစ္စမှာရှိနေဆဲအားနည်းချက်တွေကို Spatial Data Management နဲ့ tools တွေသုံးတဲ့နေရာမှာမြင်နိုင်တယ်။
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသည်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ လွတ်လပ်သောအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်း - အခမဲ့ဂြိုလ်တုပုံရိပ်များ - နှင့် gvSIG ကို Spatial Data Management tool အဖြစ်အထူးသဖြင့်တင်ပြခဲ့သည်။ Estimación de la temperatura superficial en imágenes históricas Landsat5mediante corrección atmosférica monocanal en el térmico para la cuenca del río Tempisque-Bebedero. Rubén Martínez (Universidad de Costa Rica). ဤလေ့လာမှုတွင်ဂြိုဟ်တုအချက်အလက်များထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်းကိုအခြေခံအားဖြင့်areasရိယာများ၏စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကိုပြသခဲ့သည်။
Geomatics ကိုဆက်ကပ်အပ်နှံပြီးခဲ့သည့်အစည်းအဝေးကိုအန်တိုနီယို Benlloch ၏မိန့်ခွန်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ သူသည်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကာသမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ သင်၏လုပ်ဆောင်မှုများတွင်အောင်မြင်မှု။ Benlloch သည် Geomatics ပညာရှင်များရှိသည့်အသုံးချနယ်ပယ်များ၏ဖော်ပြချက်ကိုဆက်လက်လေ့လာခဲ့ပြီးရုပ်ပုံများ၏ဒီဇိုင်းကိုသာရည်ညွှန်းသည်။
gvSIG အသင်းကပြသခြင်းကမျိုးဆက်သစ်များအပေါ်ဆက်လက်လောင်းကစားခြင်း၊ ဤနေ့ရက်များအတွက်အရေးကြီးသောသုတေသနပြုမှုပြုလုပ်သောကျောင်းသားများကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဖိတ်ကြားခြင်းများပြုလုပ်နေကြောင်းပြသခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွင်ကျောင်းသားအင်ဂျလာကာစက်စ်ကစကားဝိုင်းကိုပြောပြီး gvSIG သည်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်၎င်း၏အဓိကအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခဲ့သည်။ မိုက်ခရိုအရံ Sierra del Cid, Petrer (Alicante) ရှိသစ်ပင်ပန်းမန်များ။ မက္ကဆီကိုရှိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားAndrésMartínezGonzálezကသူ၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်ရှင်းပြခဲ့သည် gvSIG ဆော့ဝဲလ်မှတစ်ဆင့်ပထဝီဆိုင်ရာစာရင်းအင်းတွက်ချက်မှုများအတွက်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် GINI အညွှန်းကိန်းအလိုအလျောက်။
gvSIG Online နှင့် Thermal Remote Sensing gvSIG ၏နိဒါန်း။ ထိုနေရာတွင် gvSIG အသင်းမှအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောသုတေသနညီလာခံများကိုယခင်ကတက်ရောက်ခဲ့ဖူးကြောင်းအလေးအနက်ပြောကြားခဲ့ပြီးအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် geospatial data အမျိုးအစားများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ကြောင်း gvSIG အသင်း၏အားထုတ်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုထိုက်သည်။ များစွာသောအားဖြင့်၎င်းနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောသူများ၏ကောင်းကျိုးများကိုကြည့်ရှုစူးစမ်းရန်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့်လက်ရှိတွင်စီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဒါ့အပြင်မျှတတဲ့ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအောက်မှာရောင်းချနိုင်စွမ်းဟာအစွန်းရောက်ရာထူးတွေကိုစွန့်လွှတ်ပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုအာရုံစိုက်စေတယ်ဆိုတာပါဘဲ။
ယခင် Post မှ« Previous ၁၅ ကြိမ်မြောက် gvSIG ညီလာခံ - နေ့ ၁
Next Post Plex.Earth Timeviews သည် AEC ပညာရှင်များအား AutoCAD အတွင်းနောက်ဆုံးပေါ်ဂြိုလ်တုပုံရိပ်များကိုပေးသည်နောက်တစ်ခု»